Gabon : Fihetsiketsehana eo amin’ny sehatry ny solika · Global Voices teny Malagasy
Gabon : Fihetsiketsehana eo amin'ny sehatry ny solika
Voadika ny 10 Avrily 2011 9:00 GMT
Raha samy mitady vahaolana hafa momba ny olana ara-tsolika ny firenena eran-tany, ny firenena Gabon kosa izay saika mifototra tanteraka amin'io harena io dia mbola manana tahiry. Tao anatin'ny volana vitsivitsy anefa, tratran'ny fikomiana ny firenena izay tsy dia nivoaka firy tamin'ny fampahalalam-baovao, ary ny faran'ny volana janoary teo koa no nanao fanambarana tsy ara-dalàna ny mpanohitra ny fitondrana fa izy no Filohan'ny Repoblika. Ankoatra ny olàna ara-politika, mihetsika mafy ny firenena Gabon manoloana ny olana ara-tsolika, izay mandrafitra ny 60% ny fidiram-bola-panjakana.
Libreville, Gabon, sary nalain-ny carlosoliveirareis ao amin'ny Flickr Creative Commons License 2.0
Nanomboka ny Asabotsy 2 aprily, nanazava ny AFP fa:
Saika ny ampahan'ny famokaran-tsolika ao Gabon, firenena atsimon'i Sahara faha-efatra mpamokatra solika, no niato tamin'ny Asabotsy, tamin'ny andro faharoa ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpiasa amin'io sehatra io, kanefa ny ao Libreville sy Port-Gentil, dia tsy manana ambin-tsolika intsony ny mpaninjara.
Shell sy Total, mpaninjara solika lehibe ao an-toerana koa no nijanona tanteraka ny famokarany.
Mikasika ny fampiasana ny mpiasa avy any ivelany ireo fangatahana lehibe natao:
L’Onep (l’organisation nationale des employés du pétrole) na (fikambanan'ny mpiasa eo amin'ny sehatry ny solika eto amin'ny firenena) no nanao fihetsiketsehana tamin'ny Alakamisy sasa-kalina mba hisian'ny didimpanjakana mikasika ny fampiasana ny mpiasa vahiny. Re mandrakariva ny tolona ataon'ny Onep amin'ny tsy fankasitrahany ny fampiasana ireo mpiasa ambony nifindra monina (expatrié) ary indrindra koa ny tsy fanekeny ny fangalana mpiasa afrikanina na aziatika izay heveriny fa tsy dia mamokatra tsara.
Araka ny nazavain'i Desiré Clitandre Dzonteu, nanambara ny fametrahana orinasa manao fanadihadiana manokana ny sehatry ny solika ny Filoham-pirenena.
Manara-maso ny fivezivezen'ny vola avy amin'ny indostria mpamokatra solika no fanambin'ny orinasa misahana ny fanadihadiana voalohany ary koa ny manatsara ny fitantanany. […] Ny tanjona lehibe amin'ny fametrahana ny orinasa, hoy ny Filoham-pirenena nanasongadina dia ny hijery tsara raha ahazoana tombotsoa na tsia ho an'ny governemanta Gaboney izay mety ho voafaritry ny fifanekena natao .
Toa hita manangasanga anefa ny fikasana handeha irery, na eo anivon'ireo mpiasa na eo anivon'ny fanjakana, amin'ny resaka fitantanana sy fikarakarana ny sehatry ny solika ao Gabon. Serge Tchaha nanazava:
Misy foana ny tahotra aretina holandey izay mananontanona ireo firenena manana izany karazana loharanon-karena izany. Kanefa tokony ekena koa fa tahiry amin'ny fanatsarana ny fahasalamana ara-toekarena sy ara-bolan'ny firenena izany loharanon-karena izany.